Lenovo Z5 waxaa lagu iibiyay maalintiisii ​​ugu horreysay iibinta Shiinaha | Androidsis
Eder Ferreño | | Shiinaha Shiinaha, Lenovo, Mobiles
Toddobaad ka hor ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay shirkadda Lenovo Z5, Calanka cusub ee soo saaraha Shiinaha. Taleefan wax badan ballan qaaday oo ku saleysan sawirkiisa, laakiin markii la soo bandhigo ka dib, dareenka guud wuxuu ahaa mid niyad jab ah. Tijaabada aashitada ayaa ahayd mid lagu bilaabay suuqa, taas oo ka dhacday 12-kii June dalka Shiinaha. Waxayna umuuqataa in imtixaankii laga gudbay.
Sababtoo ah Lenovo Z5 ayaa laga iibiyay maalintiisii ​​ugu horreysay iyadoo lagu iibinayo Shiinaha. Waxay sidoo kale ku sameysay daqiiqado yar gudahood. Marka waxay u muuqataa in qalabka soo saaraha uu abuurayo xiisaha dalka. Qiimaheeda hoose, kaliya 172 euro in la beddelo, ayaa waliba caawiya.
Taleefanka ayaa laga bilaabay dukaanka caanka ah ee Shiinaha ee JD.com. Iyo maalinta koowaad ee iibka, ayaa noqday telefoonka ugu iibinta badan dukaanka. Marka iibkii Lenovo Z5-kan aad ayuu u fiicnaa. In kasta oo, ugu yaraan illaa iyo hadda, tirooyin la taaban karo oo iib ah lama bixin.
Sidan oo kale, Waxay ka sarreysay taleefannada kale sida Xiaomi Mi 12 ama iPhone X ee iibka Talaadada, Juun 8. Waa natiijo aad u wanaagsan oo soo saaraha ah, oo dooneysa inay ka dhigto dhulka ka lumay suuqa gudaha. Qalabkani wuxuu noqon karaa mid wax ku ool u leh arrintan.
Waxay umuuqataa in xayeysiis xumida ay shirkada sameysay, oo inta badan sabab u aheyd niyad jab ay muujiyeen xarumo badan, aysan wax saameyn ah ku yeelan iibintooda. Lenovo Z5 wuxuu soo bandhigayaa qiimo wanaagsan oo lacag ah, taas oo ka dhigaysa ikhtiyaar wanaagsan dad badan inay tixgeliyaan.
Waqtigan xaadirka ah, taleefanka ayaa laga bilaabay suuqa Shiinaha. Lama oga goorta ay imaan doonto dalal kale, haddii ay bilaabayaan. Marka waa inaan sugnaa in yar. Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko haddii ay maamusho inay la socoto iibka wanaagsan ee suuqa toddobaadyada soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Lenovo Z5 ayaa lagu iibiyaa daqiiqado gudahood markii laga bilaabay Shiinaha
Habka mugdiga ah ayaa ku soo socda Android iyadoo cusbooneysiin soo socota
Samsung Galaxy S7 iyo S7 Edge ayaa cusbooneysiinaya Android 8.0 Oreo ee Spain